Lozam-pifamoivoizana amin'ny bisikileta na moto | Law Firms Dubai
Bisikileta na motera moto
Isan-taona, olona maro no iharan'ny lozam-pifamoivoizana noho ny tsy firaharahiana sy ny familiana maimaika. Nitombo ny tranga ny lozam-pifamoivoizana sy ny môtô tany Dubai nandritra ny taona maro, nandratra olona tsy tambo isaina ary namono olona vitsivitsy aza.
tafiditra amin'ny lozam-pifamoivoizana na môtô
Mangataha onitra amin'ny mpandika lalàna
Raha tafiditra amin'ny lozam-pifamoivoizana na môtô ianao noho ny tsy fandisoana anao dia manan-jo hitaky onitra amin'ny mpandika lalàna ianao. Ny fomba tsara indrindra anaovana izany dia ny fanofana mpisolovava lozam-pifamoivoizana na ny mpisolovava amin'ny lozam-pifamoivoizana ao Dubai.
Antony mahazatra amin'ny lozam-pifamoivoizana na lozam-pifamoivoizana
Any Dubai, ny antony mahazatra amin'ny lozam-pifamoivoizana na môtô dia mety hiteraka vokatry ny antony marobe. Ny sasany amin'izany dia:
Miantso na mandefa hafatra rehefa mitondra fiara
Tsy manaraka ny lalànan'ny fifamoivoizana
Fanovana lalana tsy ara-dalàna
Mpamily tsy za-draharaha
Fihenan-tsaina raha mitondra fiara
Inona no tokony hatao aorian'ny lozam-pifamoivoizana na lozam-pifamoivoizana?
Ny zavatra ataonao rehefa tafiditra amin'ny lozam-pifamoivoizana na môtô dia mety hisy fiantraikany amin'ny fiarovana anao, manome lalana ny fitadiavana onitra mahomby, ary manakana ny fety hafa tsy hanome tsiny anao. Ny zavatra vitsivitsy manan-danja tokony hatao aorian'ny lozam-pifamoivoizana dia voatanisa etsy ambany:
Mandehana any amin'ny toerana azo antoka hialana amin'ny lozam-pifamoivoizana hafa ary tongava amin'ny ratrao raha sendra mafy izy ireo. Mitadiava fitsaboana raha ilaina izany.
Mifandraisa amin'ny polisy sy ny manampahefana hafa.
Angony maso-vavolombelona sy porofo amin'ny alàlan'ny fakana sary. Aza mandositra ny tranokala.
Ampahafantaro ny orinasa fiantohana anao ary ambarao azy ireo ny antsipiriany.
Katsaho ny fisoloana tena ara-dalàna amin'ny alàlan'ny fiantsoana mpisolovava manokana na mpisolovava.
Karazana ratra vokatry ny loza
Ny lozam-pifamoivoizana kely dia mety hiteraka ratra kely toy ny ratra na ny ratra amin'ny hozatra. Na izany aza, ny lozam-pifamoivoizana lehibe dia mety hiteraka ratra mafy ary na dia ho faty aza. Voalaza eto ambany ny karazana lozam-pifamoivoizana mahazatra indrindra vokatry ny lozam-pifamoivoizana na moto.
Ny taolana sy ny fongotra
Tratra sy lohany
Ny làlan-kaloka sy kapoka
Ratra maharitra na malemy
Ratra amin'ny tadina sy lamosina ao aoriana
Naratra mafy teo amin'ny kibony na fitoeram-batana
Andraikitra sy onitra
Raha oharina amin'ny lozam-pifamoivoizana, ny lozam-pifamoivoizana na ny bisikileta dia mety lafo mihoatra ny 12 ny vidiny amin'izany. Amin'ny maha-niharan'ny lozam-pifamoivoizana ianao, afaka mitaky onitra ho an'ny volam-pitsaboana ankehitriny sy amin'ny ho avy isika, ny alahelo ara-pihetseham-po noho ny fanaintainana sy ny fijaliana, ny fahaverezan'ny karama na ny vola, ary ny fahavoazana sazy na ny fatiantoka fananana.
Na izany aza, raha te hitaky soa aman-tsara ianao, dia tsy maintsy resy lahatra ireo mpitsara fa tsy ianao no diso ary narahinao ny fitsipika manan-danja. Raha tsy izany, dia mety ho tompon'andraikitra ianao. Ohatra,., Raha tsy manao fiarovan-doha ianao rehefa mitondra fiara, dia mety ho tompon'andraikitra koa ianao.
Ahoana ny fanampiana ny mpisolovava?
Ny mpisolovava amin'ny ratra manokana na mpisolovava manokana momba ny lozam-pifamoivoizana na môtô any Dubai dia mety hanampy anao amin'ny tranga lozam-pifamoivoizana na môtô satria efa zatra amin'ny lalàna izy ireo ary miatrika raharaha maro tsy tambo isaina. Raha tsy misy mpisolovava tsara dia manana lozam-pifamoivoizana na lozam-pifamoivoizana eo anilanao, dia lasa sarotra ny mitaky fanonerana satria tsy hainao ny manohy ny raharaha.
Tsy afaka hitari-dalana anao fotsiny amin'ny fanaovan-javatra sarotra izy ireo fa azo antoka ihany koa fa tsy tompon'andraikitra amin'ny loza ianao na farafaharatsiny, manamaivana ny fotoana mety hisy. Ho fanampin'izay, amin'ny fisolovava anao ao amin'ny tribonaly, ny mpisolovava mahay dia afaka mifampiraharaha aminao mandritra ny fitoriana na mahazo onitra tsara indrindra.
Mpisolovava manokana momba ny ratra na mpisolovava manokana momba ny lozam-pifamoivoizana na môtô any Dubai